Kooxaha Burcad Badeed Ah Oo Qafaashay Markab Laga Leeyahay South Africa | Radio Muqdisho	Friday, May 24th, 2013	Bogga Hore
Kooxaha Burcad Badeed Ah Oo Qafaashay Markab Laga Leeyahay South Africa
Published on August 5, 2012 by Canab · No Comments · 1,833 views
Kooxaha burcadbadeedda ayaa khaarijiyay labo ka tirsan shaqaalihii saarnaa Markab laga leeyahay dalka koonfur Africa oo ay qafaasheen iyagoo dhanka kalena horay u kaxeystay Afar ka mid ah shaqaalihii ka badbaaday weerarka.
Sarkaal ka tirsan dowladda South Africa ayaa xaqiijiyay in Xilliga la afduubanayay Markabka uu maryay meel ka tirsan xeebaha dalka Nageria.
Kooxaha afduubka u geystay markabkaasi laga lahaa dalka Koonfur Africa ayaan la ogeyn halka ay ula dhaqaaqeen waxaana illaa iyo haatan la ogeyn Wadamada ay dhalasho ahaan kasoo jeedaan shaqaalihii la socday markabka ee u gacan galay kooxda burcad badeedda ah.
Sidoo kale ma jirto waxa war ah oo kasoo baxay Dowladda South afrika oo la sheegay in dalkeeda laga lahaa markabka la qafaashay.
Kooxaha burcadbadeedda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay sii labojibaaray weerarada ay ku qafaalanayaan maraakiibta ganacsi ee isticmaasha xeebah Africa iyagoo lacago malaayiin dollar ah ka qaata Maraakiibta iyo Shaqaalaha ay afduubtaan.